यी तस्वीर हेर्नुस्, खित्का नछुटे भन्नुस्
यो दुनिया विचित्रको छ । विचित्र कुरा गरेर वा देखाएर अरुलाई छक्क पार्ने काम धेरैले गर्छन् । कतिपय विचित्र काम गर्छुभन्दा आफै जिल्लिन्छन् पनि । यो तनावमय दुनियामा आफु खुसी रहनु त ठूलो कुरा...
अनौठो होटल : कमोटमा आची गर्ने होइन खाना खानुपर्ने
शौचालयमा कमोट हुन्छ र त्यसमा दिशा पिसाब गरिन्छ । तर जापानमा एउटा यस्तो होटल छ, जहाँ कमोटमा दिशा पिसाब होइन पाहुनाले खाना खान्छन् । सुन्दै घिन लाग्नसक्छ । तर घिन मान्नुपर्ने कुरा केही छैन...
अस्पतालले कुमारी केटीको रगत मागेपछि…….
एक अस्पतालले १ सय जना कुमारी केटीको रगत माग गरेपछि त्यसले ठूलै चर्चा पाएको छ । चीनको बेइजिंगस्थित युनिभर्सिटी क्यान्सर अस्पतालले १ सय जना कुमारी युवतीको रगतको नमूना माग गरेको हो । कुमारी युवतीको...
सम्बन्ध विच्छेदपछि पुरुषहरुमा सम्भोगको चाहना कम हुन्छ होला वा बढि ? डिभोर्स भएर श्रीमतीबाट अलग्गिएका पुरुषहरुमा यौनेच्छा बढि होला की विवाह नै नगरेका तन्नेरीहरुमा ? सामान्य अड्कल काट्ने हो भने सहबासबाट एक प्रकारले अघाएका...
खाने हो पाँच लाख तलबको सुत्ने जागिर ? यहाँ फाराम भरिहाल्नुस्
जागिरमा त काम पो गर्नुपर्छ । काम गर्ने ठाउँमा वा कार्यालयमा गएर सुत्न कहाँ पाइन्छ र । तर केही जागिर यस्ता पनि हुँदा रैछन् जसमा काम नै सुत्ने हुँदोरहेछ । कामै गर्न नपर्ने र...
आमै !!! महिलाको झोला कति फोहोर ?
प्रायः युवतीहरु चिटिक्क परेर, चिटिक्कको ह्याण्डब्याग समातेर हिँड्छन् । तर उनीहरुले समातेको त्यो झोला कति धेरै फोहोर हुँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाउने हो भने आङै जिरिंग हुन्छ । महिलाको त्यो हाते झोलामा विभिन्न...
सपनाको भिडियो रेकर्ड गरिने, आफुले देखेको सपना आफ्नै आँखाले हेर्न पाइने
निदाएको बेलामा देखेको सपनाको दृश्य बिउँझिएपछि सबै शून्य हुन्छ । सपनामा एकपटक देखिएको दृश्य ब्युँझिएपछि चाहेर पनि त्यो फेरि देख्न वा साँच्चीकै जिवनमा आँखाले हेर्न असम्भव नै हुन्छ । तर अब भने निदाएको...
झिँगेमाछाबाट अचम्मको बाइक
महंगो तथा स्वादिलो झिँगेमाछा खेर फाल्न कसले चाहन्छ र ? तर आखिर मुखभित्र नहाल्नु मात्र खेर फाल्नु रहेनछ । एक जना मान्छेले झिँगे माछालाई यसरी सदुपयोग गरे की सबै मान्छेको मुख रसाउने मौकै जुरेन...
छोरीका लागि जिउँदै मरिन् आमा
आफ्ना छोराछोरीले राम्ररी पढुन्, नबरालियून् भन्ने चाहना सबै आमाबाउको हुन्छ । यसका लागि बच्चाबच्चीलाई माया र डर दुबै देखाइन्छ । तर कोही कोही आमाले भने आफ्नी छोरीका लागि आफैलाई जिउँदै मार्दा रहेछन् । चीनमा...
कारसँग करणी गरेको क्यामरामा कैद भएपछि…….
रक्सीको नशाले लठि्ठएका एक युवकले पार्किङमा राखेको कारसँग करणी गरिरहेको दृश्य सिसिटीभी क्यामरामा कैद भएको छ । निर्वस्त्र भएर निलोरंगको ल्याण्ड रोबर डिस्कोभरी कारसँग मैथुन गरिरहेको अवस्थामा २४ वर्षका डानियल कुपरको करतूत क्यामरामा कैद...
बाख्रालाई बलात्कार गरेको अभियोग प्रमाणित भएपछि एक युवकले डेढ महिना जेलको हावा खानु पर्ने भएको छ । बेलायतको उत्तरपश्चिमी विल्टशायरका २३ वर्षका एक पुरुषलाई पशु करणीको मुद्दामा जेल सजाय मात्र होइन अब उनलाई देशभरका...
महिलाले ल्याइन् ‘वक्ष मसाज’ सेवा
भिमकाय वक्षस्थल भएकी एक महिलाले वक्ष मसाज सेवा को घोषणा गरेकी छिन् । अमेरिकाको एटलान्टाकी क्रिस्टि लभ नामकी ती महिलाले आफ्ना बडेमाका वक्षस्थलले ग्राहकलाई मसाज गर्नेछिन् । मसाज थेरापीकी विज्ञ समेत रहेकी ३४ वर्षकी...